I-Geosphere: iyini, iyini ukwakheka kwayo nokuthi ibaluleke kangakanani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Iplanethi yethu yakhiwe ngezinto ezinokuphila nalezo ezingenakho ukuphila. Singacabanga ngamasimu amaningi wezintaba, amahlathi, izilwandle ezibanzi nolwandle, njll. Zonke lezi zindawo zinengxenye yezinto ezingama-abiotic nezinye ezinempilo. Ubukhulu obukhulu boMhlaba akuyona into esiyibonayo emathafeni, yize kubonakala kunjalo kithi. Iplanethi yethu ngaphakathi yakhiwe ngobuningi bezinto ezinezici ezahlukahlukene. Isethi yazo zonke lezi zinto ezingenampilo yaziwa njenge umkhathi.
Kulesi sihloko sizokhuluma ngokujulile nge-geosphere. Ungafunda ukuthi iyini, yenziwa ngani, ibaluleke kangakanani nazo zonke izici zayo.
1 Yini i-geosphere
3 Izici zejazi
4 Izici zoqweqwe
I-geosphere igama elinikezwe zonke izingxenye zomhlaba, kusukela ebusweni bomhlaba kuya ngaphakathi. Lokho wukuthi, yize umkhathi futhi uyingxenye yomhlaba wethu, ubuyobe ungaphandle kwe-geosphere. Ukusinikeza umbono, i-geosphere ihlukaniswe izingxenye ezintathu: uqweqwe, ingubo kanye nomgogodla. Lezi zingxenye zaziwa njenge izingqimba zomhlaba.
Isendlalelo ngasinye noma ingxenye ye-geosphere inezinhlaka ezihlukaniswe ngokuya kokwakhiwa kwezinto, ukwakheka nokwakheka kwazo. Umsuka wesakhiwo ngasinye ungokwemvelo yezinto zokwakha ezivame ukwakha iplanethi. Siyakhumbula ukuthi, ekuqaleni kokwakhiwa koMhlaba, kwakungeyona enye into ngaphandle kwenani lezinto ezincibilikayo ezakhiwa ngokuhlangana kothuli nezinto zasemkhathini. Le nto yehlile kancane kancane yathatha isimo seplanethi esinayo namuhla.
Ngenxa yomphumela wamandla adonsela phansi, udaba olusindayo lwalugxilwe engxenyeni ye-nucleus, ngenkathi izingqimba ezinesibalo esincane zikhuphukela phezulu. Ngalesi sizathu, uqweqwe lupholile ngaphambi kokuba lube ngaphandle nengqikithi isancibilikisiwe. Ngaphezu kwalokho, kuqweqwe lolwandle nolwandle lwakhiwa, umkhathi nempilo kwavunyelwa ukukhula.
Ingxenye ngayinye ye-geosphere inezici ezihlukile futhi iyini kubenza bahluke ngokuqhathaniswa nayo yonke iplanethi. Sizobona ngamunye ngamunye.
Njengoba sazi, i umgogodla womhlaba kuyingxenye ejulile kunazo zonke. Itholakala maphakathi nomkhakha. Uma sikhuluma nge-nucleus, kufanele sazi ukuthi ihlukaniswe izingxenye ezimbili: ingaphakathi nengaphakathi. Lokhu kwehlukaniswa kungenxa yesimo sezinto ezisetshenziswayo nohlobo lwento eyenziwe ngayo. Ingqikithi yangaphakathi iyingxenye eqinile futhi iyindawo eshisa kakhulu eMhlabeni. Isizathu sokuthi siqinile futhi asincibilikisiwe yize kunamazinga okushisa aphezulu kakhulu Kungenxa yobuningi kanye nengcindezi okubekwa kuyo okokusebenza.
Izakhi ezakha i-nucleus ikakhulukazi ziyinsimbi, i-nickel, i-uranium negolide, kanye nezinye izinto. Lezi zinto zokwakha zigcine zakha umnyombo woMhlaba ngenxa yobuningi bawo. Njengoba iminyene kakhulu kunezinye izinto, idonswa ngamandla adonsela phansi ize iphelele engxenyeni ejulile. Ezinye izinto ezilula nazo zaziphelela ezansi, ngoba zazinamathiselwe kulezo ezisindayo. Lesi yisona sizathu esenza ukuthi izinto zokuminyana eziphansi zitholakale ezingxenyeni ezisemqoka noma ezijulile kakhulu.
Manje siqhubekela kungqimba olungaphandle. Njengomgogodla womhlaba, ingubo ihlukaniswe yaba ngaphakathi nangaphandle. Kulokhu sikhuluma ngokuthungwa oketshezi. Ngokuyinhloko, ingubo yakhiwa yi-magma ekhuphukela phezulu ngenxa yokuqhuma kwentaba-mlilo nokuthi, lapho ihlangana nomoya, ibizwa ngokuthi i-lava.
Ingubo inenhlanganisela ebanzi yezinto ukwedlula ingqikithi. Singathola izinto ezisindayo nezilula. Ukuba ukwakheka ketshezi, kungukuhamba okuqhubekayo ngenxa yokuba khona kochungechunge lwe-convection currents olwenzeka ngenxa yomehluko wobukhulu phakathi kwezinto ezisetshenziswayo. Ngakho-ke kukhona ukunyakaza kwamazwekazi kusuka ku ama-plate tectonics.
Isigaxa yingxenye eqinile yengaphandle lomhlaba. Bekungahlali kunje. Nini wadala umhlaba, uqweqwe olwaluketshezi lwaphola kancane kancane. Usakwenza nanamuhla. Njengoba ipholile kancane kancane, ukushisa kwakusakazeka kuye ngaphandle kweplanethi, ngakho-ke, izingqimba ezingaphezulu zaziphola. Lokhu kuholele ekutheni ukuphola komhlaba okuya ngokuqina kuphole kwenye indawo engamanzi. Kungenxa yokuthi uqweqwe lukhuni futhi lupholile ukuthi iplanethi yethu ingakwazi ukonga kangcono izinga lokushisa.
Isigaxa ungqimba loMhlaba lapho inqwaba yezinto zokukhanya zihlangana khona. Lapho ingxenye yezwe ibizwa ngokuthi yi-geosphere, sibhekisa kuzakhi ze-geology ezenzayo. Isibonelo, amaminerali namadwala, izintaba, amagquma, imikhondo, njll. Konke okwakhiwa yilezi zinto yi-geosphere.
Singathola izinto ezisindayo ezifana ne-iron, lead, uranium negolide, yize kunzima ukuthola lokho esikushilo ngaphambili. Lezi zinto zinzima futhi zingaphezulu kwamathuba ahlukahlukene. Enye yazo yilokho yahlala ebusweni bomhlaba lapho ezinye izingqimba zehlukaniswa. Lokhu kungenxa yokuthi, njengoba nje ezinye izinto ezilula zakhukhuleka neziminyene, okuphambene nakho kungenzeka nalapha. Izinto eziminyene zikhukhulwe yizinto ezincane kakhulu. Enye indlela ukuthi bafika kwiplanethi yethu ngemuva koqweqwe lwaqina ngama-meteorites nama-asteroid. Lapho beshaya indawo eqinile, bahlala lapha hhayi ngaphakathi.
Ngiyethemba lolu lwazi luzokusiza ukwazi okuningi nge-geosphere.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » I-Geology » umkhathi